IiNdawo zeeHolide zaseCarraroe - I-Airbnb
IiNdawo zeeHolide zaseCarraroe
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguMaryann
IConnemara sisithetha-ntonye sobungangamsha oburhabaxa, kubuhle basendle obungagungqiyo kunye noxolo. Embindini weConnemara kukho iCarraroe kunye neCarraroe Holiday Cottages, indawo efanelekileyo yokuhlola le ndawo intle yaseIreland.
Unxweme lwaseConnemara luneelwandle ezininzi ezintle. Eyona idumileyo kwezi yi-coral strand e-Carraroe, eyaziwa ngokuba yiTrá an Doilín. Olu luhambo lweemayile ezimbini ukusuka kumbindi welali kwaye akufanelekanga ukuba uphoswe. Kwabo bakhetha iilwandle ezithambileyo ezinesanti ezininzi zinokufumaneka eCarraroe nakwindawo engqongileyo.
Ibekwe eCarraroe kwingingqi yeGalway County, iCarraroe Holiday Cottages are 3* Fáilte Ireland evunyiweyo. Inegadi. Eli khaya leholide linendawo yokutyela.
Indlu yeholide inamagumbi okulala ama-3 ahlukeneyo kwaye ibandakanya ikhitshi elineoveni, imicrowave kunye nendawo yokutyela. I-TV enescreen esisicaba esinetshaneli zesathelayithi ibonisiwe.
Ikhaya leeholide libonelela ngebarbecue. Ibala lokudlala labantwana kunye nethala lelanga liyafumaneka ukuze iindwendwe zisetyenziswe kwiiHoliday Cottages zaseCarraroe.
IGalway ikumgama oziikhilomitha ezingama-43 ukusuka kwindawo yokuhlala. Isikhululo seenqwelomoya esikufutshane yi-Ireland West Knock Airport, iikhilomitha ezili-120 ukusuka eCarraroe Holiday Cottages.
Le propathi ikwalinganiselwe ngelona xabiso libalaseleyo eCarraroe! Iindwendwe zifumana imali eninzi xa zithelekiswa nezinye iipropathi kwesi sixeko.
Umbuki zindwendwe ngu- Maryann
Ngexesha lokuhlala kwakho nceda uqhagamshelane noMary Ann ku-087 7003011, kungenjalo nceda ufowunele i-ofisi yethu phakathi kwentsimbi ye-10 - 3pm ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu ku-091 506831. Siya kwenza konke okusemandleni ethu ukukunceda.